Xulka Qaranka K/cagta Dalak Brazil oo gaaray Dalka Koonfur Afrika – Puntland Voice
May 29, 2010 8:11 am Views: 37
Xulka Barazil ayaa 27-kii bishaan soo caga dhigtay Dalka Koonfur Afrika , iyagoo noqonaya xulkii labaad ee koobka adduunka ka qeybgalaya oo soo gaara South Africa waxaa ka horeeyay xulka Australia.
Guddiga qabanqaabada 2010 FIFA World Cup, oo uu matalayo Dr Irvin Khoza, ayaa soo dhaweeyay xulka Brazil[Selecao] ka gadaal markii ay saaka ka soo dageen garoonka OR Tambo International Airport iyagoo bisha soo aadan ka qeybgalaya FIFA World Cup.
“Anigu aad baan u cadaynayaa xulka Brazil. Waad arkaysaan way ku qanacsan yahiin waana xul muhiim u ah ciyaarahan. Waxaa jira oo keliya markii ay koox timaada inay micnuhu yahiin “Waxaynu Nahay Diyaar”ayuu yiri tababare Dunga.
“Imaanshaha xulka Brazil waxay dadka South Africans-ka siinaysaa inay ku kalsoonaadaan in ciyaaraha adduunka uu dhab ahaan uu dhacayo,” ayuu ku yiri Khoza saxaafaddii isku timid goobta.
Xulkan shanta mar hantay horyaalnimada koobka adduunka ayaa ciyaartooda ugu horeysa ay isaga hor imaanayaan garoonka Ellis Park xulka North Korea bisha June 15, iyagoo uga dhaqaaqaya garoonka Soccer City oo ay kula ciyaari doonaan Cote d`Ivoire bisha June 20. waxayna ka dib u socdaali doona Durban iyagoo wajahaya xulka Portugal bisha June 25, taasoo ah ciyaarta ugu danbaysa ee group-kooda.